अब यी फोनमा चल्नेछैन ह्वाट्सएप
ह्वाट्सएपले हालै आफ्नो सपोर्ट सिस्टम पेज अपडेट गरेको छ । उक्त अपडेटेड पेजमा ह्वाट्सएपले थप एउटा अपरेटिंग सिस्टमको नाम जोडेको छ, जसका लागि आगामी दिनमा ह्वाट्सएपको सपोर्ट मिल्ने छैन । ह्वाट्सएप..
काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भाडा सम्झौंता नगर्नेको तार काट्ने तयारी गरेपछि त्यसपछि हुने ब्ल्याक आउटको जिम्मा नलिने इन्टरनेट प्रदायक संस्था (आइएसपी)ले चेतावनी दिएको छ। आइएसपीका अध्यक्ष भोजराज भट्टले तार काटेपछि ब्ल्याक..
चिनमा रोबोटले चलाउने बस सञ्‍चालनमा आयो, कस्तो होला यो बस ?
एजेन्सी । प्रविधिले दिनप्रतिदिन छलाङ मारिरहँदा चीनले ‘डिजिटल चाइना’ अभियान अन्तर्गत स्वचालित पाण्डा बस सञ्‍चालनमा ल्‍याएको छ। उसले फुझाऊमा विहीबार डिजिटल चाइन समीटको आयोजना गर्दै उक्त स्वचालित बस सञ्‍चालनमा ल्याएको चाइना..
काठमाडौं । आफ्नो संरचना प्रयोग गरे बापतको भाडा नतिरेको बताउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट र केबल टेलिभिजनको सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूको तार काट्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले गत असारमा वृद्धि..
काठमाडौं । आइतबार दिनभरजसो सरकारी वेबसाइटहरू खुल्न सकेनन् । एकसाथ सर्भर ‘डाउन’ हुँदा वैदेशिक रोजगार, राहदानी, राजस्व र मालपोतलगायत सरकारी सेवा लिन बसेका सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुप(यो । एकैपटक दुई हजारभन्दा..
सन् २०१९ को पहिलो त्रैमासिकको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै फेसबुकले आफ्ना दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या २ अर्ब ३८ करोड नाघेको जनाएको थियो । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्यामा भइरहेको लगातारको वृद्धिको अर्को एउटा रोचक..
काठमाडौंं । नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोबाइलमा भोलिदेखि प्रिपेड अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कम्पनीको यो सेवा शुरुमा भारत र चीनमा लागू हुनेछ । टेलिकमका जीएसएम प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरु..
क्लासिकटेकले महिनाको ६९२ रुपैयाँमा ४० एमबिपिएसको इन्टरनेट दिने
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक क्लासिकटेकले नयाँ अफर ल्याएको छ। उसले वार्षिक ग्राहकहरुका लागि विभिन्न प्याकेजको अफर सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका अनुसार ४०, ५० र ६५ एमबीएस गतिमा उपलब्ध हुने प्याकेजहरु..
काठमाडौं । १ घर १ टिभीएस नारा दिइएको योजना अन्तरगरको कार्यक्रममा टिभीएस मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरुको देशभरका ९८ डिलरहरुको सहभागीता सम्पनन्न गरेको छ । यही वैशाख ४ देखि वैशाख ९ सम्म..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एसईई दिएका र अन्य विद्यार्थीका लागि विभिन्न अफर ल्याएको छ । कम्पनीले एसईई परीक्षा दिएका र उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि उपलब्ध गराएको विद्यार्थी अफरलाई निरन्तरता..
खल्ती डिजिटल वालेटले राष्ट्र बैंकबाट पायो अनुमति
काठमाडौं । खल्ती डिजिटल वालेटलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकका रुपमा अनुमति दिएको छ। राष्ट्र बैंकको ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०७२’ बमोजिम ‘खल्ती’ले दूरसञ्चार सञ्जाल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानी..
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभ कर कानूनअनुसार नभएको दाबी गर्दै एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको छ । कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार..
एनसेलले ल्यायो एसईई विद्यार्थीहरुका लागि १ रुपैयाँमा सिम, अन्य सुविधा के के छ?
काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रको टेलिकम सञ्चालक एनसेलले एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै पहिलो सिम अफर प्रस्तुत गरेको छ । यो पहिलो सिमको मुल्य केवल १ रुपैयाँ कायम गरिएको छ..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नेपालमै पहिलोपटक भ्वाइस ओभर एलिटिई सुविधा ल्याउने भएको छ। फोरजी विस्तार योजना अन्तर्गत यस्तो सुविधा थप गर्न लागिएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए। एक वर्षभित्र..
नेपालले अन्तरिक्षमा पठायो भू-उपग्रह, ‘स्याट-१’ सफलतापूर्वक प्रक्षेपण
काठमाडौँ। नेपाल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने मुलुकको सूचीमा समावेश भएको छ। नेपालको पहिलो भू–उपग्रह ‘नेपाली स्याट(१’ सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भएको छ। अमेरिकाको भर्जिनियास्थित वल्लोप्स टापुमा रहेको नासाको प्रक्षेपण केन्द्रबाट स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरिएको..
नयाँ बर्षको अबसरमा नेपाल टेलिकमको यस्तो अफर, भोलीबाटै लागू हुने
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले नयाँ बर्षको लागि स्किम ल्याएको छ। कम्पनीले २ सय रुपैयाँमा प्याक उपलब्ध गराउने छ। यो प्याकमार्फत ३ जीबी डाटा चलाउन तथा कम्पनीकै नेटवर्कभित्र २ सय मिनेट भ्वाइस कल..
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले विश्वमै पहिलो पटक फाईब जी दुरसंचार सेवा विकसित गरेको छ । कोरियाले विकसित गरेको पूर्ण–विकसित पाँचौं पुस्ताको मोबाइल नेटवर्क तीव्र गतिको यस प्रविधिले मोबाइलबाट डाटा ट्रान्सफरमा..
चीनको शंघाई शहर 5G कभरेजका लागि विश्वको पहिलो शहर बनेको छ । शंघाईले दाबी गर्दै आफू 5G कभरेज र ब्रडब्राण्ड कनेक्टीभिटी र नेटवर्क भएको विश्वको पहिलो शहर बनेको दाबी गरेको..
काठमाडौं । एनसेलले देसभरिका खुद्रा बिक्रेतालाई लक्षित गरी ‘एनसेल सुपर सेलर’योजना ल्याएको छ । योजनामा खुद्रा बिक्रेताले बम्पर उपहार स्वरुप कार, युरोप भ्रमण र आईफोन एक्स जस्ता आकर्षक उपहारहरु जित्न सक्ने..
टोयोटाले चन्द्रमामा गुडाउनको लागि यस्तो कार बनाउदै
जापानको सबैभन्दा ठूलो कार कम्पनी टोयोटाले चन्द्रमामा चल्ने कार बनाउने भएको छ । उक्त कारलाई जक्सा लूनर रोभर नाम दिइएको छ । ६ पाङ्ग्रावाला उक्त सेल्फ ड्राइभिङ कारमा दुईजना मानिसहरु..
जिमेल र गुगल ड्राइभमा किन समस्या आयो ? पत्ता लगाउदै गुगल
विश्वभर जिमेल र गुगल ड्राइभमा समस्या देखिएको खबर आएपछि गुगलले ती रिपोर्टहरुबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। गुगलले आफ्नो वेभसाइटमा सर्भिस डिसरपसनु भन्दै जिमेल र गुगल ड्राइभमा समस्या आएको उल्लेख गरेको छ।..
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले एक वर्षभित्रमा मुलुकका १० हजार स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने भएको छ। कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसार आगामी एक वर्षभित्र देशभरिका १० हजार स्थानमा निःशुल्क..
विश्व मै पहिलो पटक एलजीले ल्याउँदैछ तन्काउन मिल्ने स्मार्टफोन
काठमाडौं । विश्वका चर्चित स्मार्टफोन कम्पनीहरु यो वर्ष स्क्रिन फोल्ड गर्न मिल्ने स्मार्टफोन निर्माणमा केन्द्रित भैरहेका छन् । सामसुङ र हुवावेले आफ्नो फोल्डेबल फोन सार्वजनिक नै गरिसकेका छन् । उता एप्पलले..
काठमाडौं । मंगलबार जेनेभा स्थित मोटर शोमा सार्वजानिक भएको ‘पिनिनफरिना बाटिस्टा’ विश्वकै सबैभन्दा तिव्र गतिमा कुद्ने कार रहेको बताइएको छ । यसरी विद्युतबाट चल्ने सो कारले एकपटकको चार्जमा ४५० किलोमिटरसम्मको..
काठमाडौं । सोसल मिडिया प्लाटफर्म फेसबुकले अन्ततः प्रयोगकर्ताले व्यग्र रुपमा प्रतिक्षा गरिरहेको एउटा प्राइभेसी फिचर लञ्च गर्दैछ । clear history नामक उक्त फिचरको सहयोगमा फेसबुक प्रयोगकर्ताले फेसबुकमा एकित्रत गरिएका डाटा डिलिट..
नेपाल टेलिकमको परिस्कृत सापटीसेवा पुन सुचारु, यस्ता छन् बिशेषता
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले संचालनमा ल्याएको ‘नमस्ते क्रेडिट सेवा’ थप सुधारसहित पुन संचालनमा आएको छ । यस सेवा अन्तर्गत प्रिपेड प्रयोगकर्ताले फोनमा कुरा गर्दा गर्दै पैसा सकिएमा टेलिकमले तुरन्त सापटी..
काठमाडौं । सांसद योगेश भट्टराईले सूचना प्रविधिका सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने धारणा राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले विधेयकले अभिव्यक्ति, विचार र..
अप्टिकल फाईबर विस्तार – युटिएलसँगको ठेक्का तोडेर नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा
काठमाडौं । गण्डकी र पाँच नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाईबर विस्तार गर्ने ठेक्का तोडेर नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरिएको छ। गएको बैशाखसम्म काम गरिसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै काम नगरेकोले ठेक्का तोडेर नेपाल टेलिकमलाई..
टेलिकमको प्रजातन्त्र दिवस स्किम, अनलिमिटेड डाटा, भ्वाइस र एसएमएस अफर
काठमाडौं । प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर नेपाल टेलिकमले बिशेष अफर ल्याएको छ । टेलिकमले आफ्ना प्रयोगकर्ताको लागि एकै स्किम मार्फत अनलिमिटेड भ्वाइस, डाटा, र एसएमएसको अफर ल्याएको हो । यस अफर..
देशभर एनालग टीभी सेवा बन्द गर्न सरकारको निर्देशन, बन्द नगरे उपकरण जफत गर्ने
काठमाडौं । सरकारले देशभर पूर्ण रुपमा एनालग टेलिभिजन सेवा गर्न निर्देशन दिएको छ । गत बैशाख १५ भित्रै एनालग टेलिभिजन सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको सरकारले अटेर गरेको भेटिए उपकरण..
Results 402: You are at page4of 14